Akwụkwọ Agba Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ: nhazi ọkwa na ihe ọ pụtara
Agba Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ bụ nchịkọta nke akwụkwọ 27, nke ndị ozi dere nke ukwuu. Agba Ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ dị nsọ bụ akwụkwọ na akwụkwọ ozi edere mgbe Jisus nwụsịrị. Ọ bụ ya mere ejiri mara Agba Ọhụrụ dịka akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke Ndị Kraịst na ha bụ akwụkwọ agbakwunyere na nso nso a. ọtụtụ n'ime akwụkwọ nke Agba Ọhụrụ na -akọ akụkọ ndụ na ọrụ nke Jisus, n'ihi ya, a maara ha dị ka ozioma. Agba Ọhụrụ malitere na Oziọma Matiu wee mechie Apọkalips nke Saint John.
Ọbụnadị taa enwere nnukwu esemokwu na ngalaba ụfọdụ nke Iso Christianityzọ Kraịst gbasara ntụgharị ụfọdụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ. Ọtụtụ akwụkwọ na akwụkwọ ozi nke Agba Ọhụrụ ka edere n'asụsụ Hibru ma ọ bụ Aramaic. Mgbe ntụgharị asụsụ nke akwụkwọ Agba Ọhụrụ ka emere enwere ndị na -ekwenye na akụkụ ụfọdụ nke akwụkwọ nsọ ndị mbụ agabigabeghị. Agbanyeghị, ngalaba ndị ka ibu nke Iso Ụzọ Kraịst dịka Ụka ​​Katọlik na -agọnarị echiche ndị a ma na -ekwu na ihe niile dị mma. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị pere mpe na -ekwu na ọ bụghị, mana imirikiti ndị otu Kristi na -anabata ntụgharị nke akwụkwọ 27 ọ bụla.
1 Kedu akwụkwọ nke Agba Ọhụrụ?
1.1 Oziọma anọ ahụ
1.2 Akwụkwọ ndị mechara
2 Mkpa Agba Ọhụrụ
2.1 Nsụgharị dị iche iche
2.2 Mmekọrịta ya na okpukpere chi
Kedu akwụkwọ nke Agba Ọhụrụ?
Agba Ọhụrụ nwere ngụkọta nke akwụkwọ iri abụọ na asaa, nke e dere mgbe Jizọs nwụsịrị. Ndị a bụ akụkọ ma ọ bụ oziọma nke ndụ na ọrụ nke Kraịst na ụfọdụ akwụkwọ amụma dị ka Apọkalips nke Saint John dere. A maara Agba Ọhụrụ dịka akụkụ nke Akwụkwọ Nsọ nke Ndị Kraịst, ebe ọ bụ na ọ bụ Jizọs na -ewere mkpa karịa n'akụkụ a. N'ihi nke a ụfọdụ n'ime okpukpe ndị ọzọ na -efe otu Chukwu anaghị amata akụkụ nke akwụkwọ nsọ ọhụrụ ndị a.
Oziọma anọ ahụ
Nchịkọta akwụkwọ agba ọhụrụ na -amalite site na Oziọma anọ, nke Matiu, Mak, Luk na Jọn dere. Ha na -akọ akụkọ ndụ na ọrụ Jizọs onye Nazaret, site na ọmụmụ ya ruo ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ ya. Oziọma kacha saa mbara bụ nke Luk, ebe ọ bụ na ọ bụ nke a na -akọwa akụkụ nke akụkọ ahụ nke ọma. Obi abụọ adịghị ya, oziọma ndị ahụ bụ akwụkwọ kacha dị mkpa na agba ọhụrụ. A na -ahụta ha dịka akwụkwọ kachasị nsọ nke Akwụkwọ Nsọ, ebe ọ bụ na ha na -akọ ndụ na ọrụ nke Kraịst Onye Nzọpụta. Otú Ọkpara Chineke si nye ndụ ya maka ụmụ mmadụ.
Akwụkwọ ndị mechara
Ka emechara oziọma ndị ahụ, ngụkọta nke akwụkwọ 23 fọdụrụ mejupụtara Agba Ọhụrụ. Ha dịkwa oke mkpa ma kọwaa akụkụ nke afọ ndị mbụ nke Iso Ụzọ Kraịst. Akwụkwọ ndị a, nke ndịozi Jizọs onye Nazaret dere, na -ekwu maka Iso Ụzọ Kraịst dịka nzọpụta. Nke mbụ n'ime ha nwere ike bụrụ otu n'ime ihe kachasị mkpa, akwụkwọ a bụ Ọrụ Ndịozi na -eche na ọ bụ Pọl onyeozi dere ya.
Ndepụta nke akwụkwọ Agba Ọhụrụ ndị mechara:
Akwụkwọ ozi ndị Rom
Akwụkwọ ozi mbụ nye ndị Kọrịnt
Akwụkwọ ozi nke abụọ nye ndị Kọrịnt
Akwụkwọ ozi nye ndị Galetia
Akwụkwọ ozi nye ndị Efesọs
Akwụkwọ ozi nye ndị Filipaị
Akwụkwọ ozi nye ndị Kọlọsi
Akwụkwọ ozi mbụ nye ndị Tesalonaịka
Akwụkwọ ozi nke abụọ nye ndị Tesalonaịka
Akwụkwọ ozi mbụ maka Timoti
Akwụkwọ ozi nke abụọ nye Timoti
Akwụkwọ ozi nye Taịtọs
Akwụkwọ ozi nye Faịlimọn
Akwụkwọ ozi nye ndị Hibru
Akwụkwọ ozi nke Santiago
Akwụkwọ mbụ nke Saint Peter
Akwụkwọ ozi nke abụọ nke Saint Peter
Akwụkwọ mbụ nke Saint John
Akwụkwọ ozi nke abụọ nke Saint John
Akwụkwọ ozi nke atọ nke Saint Jọn
Akwụkwọ ozi nke Saint Jud
Apọkalips nke Saint John.
Mkpa Agba Ọhụrụ
A ma akwụkwọ Akwụkwọ Nsọ nke Agba Ọhụrụ ama maka nnukwu mkpa ha. Kemgbe akwụkwọ ndị a ha na -akọ akụkọ ndị dị mkpa na ndụ na ọrụ nke Jizọs onye Nazaret, site na ọmụmụ ya ruo ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ ya. Ọ bụ ya mere, maka Iso Christianityzọ Kraịst, Agba Ọhụrụ bụ akụkụ kachasị nsọ nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ dị nsọ, Oziọma ndị ahụ kacha mkpa. Agba Ọhụrụ kọkwara akụkụ nke ihe ndị ozi Jizọs gabigara igosi ụwa Iso Ụzọ Kraịst dị ka ụzọ nzọpụta. Na mgbakwunye na akụkọ ikpeazụ gbasara ka ụbọchị ikpeazụ nke mmadụ nwere ike ịdị n'elu ụwa.
Akwụkwọ nke Agba Ọhụrụ nwere njirimara nke ịbụ ezigbo ihe na ikwu ozi Kraịst kpọmkwem. Ọ bụ n'ihi nke a ka akwụkwọ nke ọ bụla jiri nwee nnukwu mkpa n'ime Akwụkwọ Nsọ. Imirikiti nnukwu ngalaba nke Iso Christianityzọ Kraịst na -amata akwụkwọ nke Agba Ọhụrụ, dị ka ihe atụ ị ga -eso wee ghọta ntakịrị ihe banyere ndụ Jizọs. Nke ọ bụla n'ime akwụkwọ iri abụọ na asaa nke Akwụkwọ Nsọ nwere akụkọ pụrụ iche na pụrụ iche.
Nsụgharị dị iche iche
A ga -ekwurịrị na e gburu ndị mbụ ndị nwara ịsụgharị Agba Ọhụrụ n'asụsụ Bekee na Spanish. Ihe kpatara nke a bụ n'ihi arụrụala nke Njụta Okwukwe nke Chọọchị Katọlik na ndị otu ya. Taa A sụgharịrị akwụkwọ Agba Ọhụrụ n’ihe karịrị narị asụsụ abụọ, nke na -eme ka anyị mata nke ọma etu akụkụ akwụkwọ nsọ ndị a siri dị oke mma. Nnukwu ngalaba nke Iso Christianityzọ Kraịst ọgbara ọhụrụ, gụnyere Chọọchị Katọlik, kwenyere na ha ga -ebu ọnụọgụ ntụgharị. Ebe ọ bụ na ọ dị mkpa na mpaghara niile nke ụwa ha nwere ike ịma akụkụ nke ndụ na ọrụ Jizọs.
Mmekọrịta ya na okpukpere chi
Ruo ogologo oge, okpukpe dị iche iche emeela ka ndị na -eso ụzọ ha kwenye na okpukpe ha bụ nke anabatara. Ya mere, ndị niile na -ekpe okpukpe ndị ọzọ, ọ bụrụgodị na ha na -etokwa Chineke, agaghị enweta nzọpụta. Nke bụ ihe nzuzu, ebe ọ bụ na akwụkwọ Agba Ọhụrụ na -ekwu maka nzọpụta na mgbaghara, ọ bụghị ịma ikpe. Akụkọ ndị a anaghị eguzobe okpukpe ọ bụla karịa ndị ọzọ, ha na -ekwu maka Iso Ụzọ Kraịst dịka ụzọ isi nweta nzọpụta. Ọzọkwa, ọkwa maka ya na ha na -agba gị ume ka i soro Jizọs ka ịchọta ụzọ ị ga -aga paradaịs.
Inicio » omenala » Akwụkwọ Agba Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ
4 kwuru na "Akwụkwọ Agba Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ"
Jenụwarị 7, 2019 na 9:55 ụtụtụ
Ozi doro anya nke bara uru nke ukwuu maka anyị ndị chọrọ ịme ọmụmụ ihe. Daalụ maka ozi a, ọ na -agbasa anyị ma na -egosi anyị na ndụ anyị dịka ndị na -eso ụzọ nwanne anyị nwoke bụ JESUS🛐
February 16, 2019 na 9:02 am
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ozi ahụ
Ọ na -enyere m aka nke ukwuu n'ịmụta Onyenwe anyị Jizọs
July 12, 2019 na 5:23 pm
Daalụ, ọ bụ nnukwu ozi ịmatakwu banyere Jizọs Kraịst Onyenwe m, ọ na -enyere aka ịghọta Agba Ọhụrụ nke ukwuu.
Ọgọst 23, 2019 na 3:11 pm
Eziokwu bụ na ọ dị mma mana ọ nweghị nkọwa nke ozi -ọma mana ihe ọ bụla dị mma